नेपाल भर्सेस युएईः युएइका कप्तान आउट, सन्दिपले लगे विकेट ! [LIVE] – Everest Dainik – News from Nepal
नेपाल भर्सेस युएईः युएइका कप्तान आउट, सन्दिपले लगे विकेट ! [LIVE]
काठमाडौं, भदौ १४ । मलेसियामा जारी एसिया कप छनोट प्रतियोगिता अन्तर्गत आज नेपालले युएईको सामना गर्दैछ । नेपालले आज टस जितेर फिल्डीङ गर्ने निधो गरेको छ । यसैबीच, नेपाललाई दोस्रो सफलता मिलेको छ । युएइका कप्तान रोहन मुस्तफालाई सन्दिप लामिछानेले आउट गरेका छन् । यसअघि बसन्त रेग्मीले पहिलो विकेट लिएका थिए ।
नेपाल आज बुधबार ओमानसँगको नमिठो हारको बदला लिन मैदान उत्रिएकाे छ । नेपालले एसिया कप टनोट हुनका लागि अब सबै खेल जित्नु पर्ने दबाब छ । ओमानविरुद्ध नेपालको मध्यक्रमले उत्कृष्ट ब्याटिङ गरेको थियो । जहाँ सागर पुनको ८३ रनको इनिङ उल्लेखनीय थियो । एक वर्षपछि राष्ट्रिय टोलीमा फर्किएको पहिलो खेलमै सागरले शानदार प्रदर्शन गरेका हुन् । तर, बुधबार नेपाल युएइसँग ७ विकेटले पराजित भयो ।